Mayelana NATHI - Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd
Isungulwe ngo-2000, iShenxian Shuiyuan New Energy Technology Co., Ltd etholakala esifundazweni saseShandong, sinomlando weminyaka engama-20 wokuhlanganiswa kwamakhemikhali amahle, amakhemikhali aphilayo, ama-agent asizayo wamakhemikhali. singabakhiqizi abakhiqizi abakhethekile ekukhiqizeni i-Dibenzoylmethane (DBM) kanye ne-furfural.The inkampani manje isebenzisa izisebenzi ezingama-350, kufaka phakathi abaphothule iziqu abayi-120 basekolishi kanye nonjiniyela abangama-21 nochwepheshe bezomnotho abayi-5. , I-Shangqiu juyuan chemical manufactory kanye ne-Liaocheng shuiyuan ubuchwepheshe obusha bamandla i-manufactory.The inkampani yezobuchwepheshe inamandla, izindlela zokuhlola ziphelele futhi nemishini yokukhiqiza inhle kakhulu.
Njengomunye wefektri enkulu kunazo zonke emhlabeni yokukhiqiza ngobungcweti iDibenzoylmethane (DBM) enomthamo waminyaka yonke wamathani we-10,000 metric, njengomunye wabakhiqizi abangochwepheshe abaphezulu emhlabeni onobungako bamathani wamathani we-30,000 waminyaka yonke. Imikhiqizo isebenzisa kakhulu i-methanol ne-acetic acid kusuka emakhomeni ommbila, asetshenziselwa ukukhiqizwa kwe-Dibenzoylmethane kanye ne-furfural, ukusetshenziswa okuhlukahlukene, ikakhulukazi i-furfural alcohol resin yemithi kanye nemboni yamakhemikhali emihle ezindaweni. Imikhiqizo yendalo ingasetshenziswa ekukhiqizeni imithi, i-furfuryl alcohol, izinongo, ama-flavour, izinhlaka neminye imikhiqizo.
Yini esikhiqiza kakhulu?
Sinjani Isizinda Sethu Sokukhiqiza ？
Iyimboni yamamitha-skwele angama-83,916 kufaka phakathi isikwele amamitha ayisikwele angama-50,000.Inkampani inabasebenzi abangaphezu kwama-350, amandla amakhulu wezobuchwepheshe, inengcweti ehlanganyele ocwaningweni lomkhiqizo nentuthuko ithimba lobuchwepheshe, futhi igcina ukubambisana okusondelene nezikhungo eziningi zocwaningo lwesayensi ezidumile zasekhaya. , sinamathela kumqondo wezesayensi nezobuchwepheshe emisha kanye nokuvikelwa kwemvelo okusha okungeyona into enobuthi ye-PVC yokusiza ukushisa okuzinzile kwe-Dibenzoylmethane (DBM) kanye ne-furaldehyde nemikhiqizo yokukhiqiza yemikhiqizo yempahla kanye nenkampani yokuthengisa umthamo waminyaka yonke wokukhiqiza amathani angama-40,000, inkampani inomkhiqizo wobuchwepheshe obuthuthukile emhlabeni ulayini kanye nemishini yokukhiqiza enkulu kunazo zonke emhlabeni iDibenzoylmethane (DBM), ikhwalithi yomkhiqizo ifinyelele ezingeni eliphakeme lamazwe omhlaba.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi nge-imeyili yethu:
uma unemibuzo, sizozama ukuphendula kungakapheli amahora angu-12.